ललितपुर र भक्तपुरमा कस्तो नयाँ शहर बनाउने ? डीपीआरको जिम्मा नेपाली कम्पनीलाई « Clickmandu
ललितपुर र भक्तपुरमा कस्तो नयाँ शहर बनाउने ? डीपीआरको जिम्मा नेपाली कम्पनीलाई
प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार १३:३०
काठमाडौं । ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको १०-१० हजार रोपनी जमिनमा बन्ने नयाँ शहरको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) एक बर्षमा तयार हुने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकारणले ललितपुर र भक्तपुरमा बन्ने नयाँ शहरको डीपीआर एक बर्षमा निर्माण गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।
उपत्यका विकास प्राधिकारणका शहरी योजना विज्ञ भागवतभक्त खोखालीले ललितपुर र भक्तपुरमा बन्ने नयाँ शहरको डीपीआरका लागि इआरएमसी–एइएसटी–एडीए जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको जानकारी दिए ।
‘ललितपुर र भक्तपुरमा नयाँ शहर बनाउनका लागि इआरएमसी-एइएसटी-एडीएसँग बुधबार ठेक्का सम्झौता भएको छ, ठेक्का सम्झौता भएको मितिको एक बर्ष भित्रमा उनीहरुले डीपीआर तयार गरेर बुझाउने छन्,’ खोखालीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
सम्झौताअनुसार तीनवटै कम्पनीले संयुक्तरुपमा डीपीआर तयार पार्नेछन् ।
ललितपुर र भक्तपुर दुवै जिल्लामा निर्माण हुने नयाँ शहरको डीपीआर बनाउने जिम्मा इआरएमसी–एइएसटी–एडीए जेभीले पाएको हो । प्राधिकारणका अनुसार दुई नयाँ शहरको डीपीआरका लागि ठेकेदारसँग १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।
प्राधिकारणले काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको अव्यवस्थित शहरीकरणलाई न्युनिकरण गर्नका लागि उपत्यकाका ३ जिल्लाको ४ स्थानका १ लाख ३० हजार रोपनी जमिनमा नयाँ शहर बनाउन लागिरहेको छ ।
४ स्थानमध्ये २ स्थानको डीपीआर निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भईसकेको छ । काठमाडौं जिल्लाको भूभागमा पर्ने अन्य २ शहरको डीपीआर सम्झौता हुन केहि समय लाग्ने देखिन्छ । काठमाडौंका २ शहरमध्ये एउटा १ लाख रोपनी र अर्को १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ ।
काठमाडौं जिल्लाका १ लाख रोपनी जमिनमा बन्ने नयाँ शहरको डीपीआर विदेशी कम्पनीले निर्माण गर्ने छन् । सो क्षेत्रका लागि परेका प्रस्तावहरु मूल्याङकन चरणमा रहेको प्राधिकारले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, काठमाडौं जिल्लामा बनाउन लागिएको अर्को १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको नयाँ शहरको डीपीआरका लागि पुनःटेण्डर खोल्न लागिएको छ । यसअघि जारी गरिएको टेण्डरमा प्राविधिक गडवडी देखिएकाले पुनःटेण्डर गर्नु खोल्न लागिएको प्राधिकारणले जानकारी दिएको छ ।
यी हुन् डीपीआर तयार हुने दुई नयाँ शहर